Gastrozika sinoa, fomba valo matsiro tokoa | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Shina, gastronomy
Sina dia tany taloha ary firenena midadasika, miaraka amin'ny kilometatra sy kilometatra fanitarana, karazan-drafitra, toetrandro, kolontsaina ary fomba amam-panao.
Noho izany, tsy azo atao ny miresaka tokana sinoa tokana. Betsaka, na dia ny sinoa aza dia nanena azy ireo ho karazany valo izay misy ifandraisany amin'ny faritra manokana ao amin'ny firenena. Ny dia fitsangatsanganana dia fitsangatsanganana ihany koa fahitana gastronomikaKa rehefa mankany Chine ianao dia miomàna hanandrana tsiro arivo.
1 Gastronomika sinoa
2 Ireo nahandro valo nentim-paharazana any Sina
Izy io dia azo zaraina amin'ny fomba fahandro sy ny akora samihafa, satria ny faritra tsirairay dia mamokatra ny azy. A) Eny, Azontsika atao ny miresaka momba ny nahandro sinoa andrefana, atsinanana, atsimo, avaratra ary afovoany.
Na dia matsiro kokoa aza ny nahandro ao afovoan-tany, ny an'ny atsimo kosa dia marikivy kokoa, ny atsinanana dia maivana sy mamy ary ny tandrefana dia manana zanak'ondry ho protagonista tanteraka. Ilay avaratra dia masira, tsotra kokoa ary vitsy ny legioma ary betsaka ny varimbazaha.
indrindra Io no nahandro ny avaratr'i Sina izay matetika no tian'ny Tandrefana indrindra. Any Beijing no misy ny Ganagana Peking, henan'omby sy ronono avy any Mongolia anaty na mofo tsy misy masirasira avy amin'ny Silamo vitsy an'isa. Saingy araka ny ho hitantsika dia lavitra ny tsara indrindra na izy irery ihany.
Ireo nahandro valo nentim-paharazana any Sina
Voalohany manana ny nahandro guangdong, matetika Cantonese. Mamy izy io, misy saosy ary iray amin'ireo malaza indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Sakafo Hong Kong io ary ny faritanin'i Guangdong, miaraka amin'i vary betsaka ary trondro sy trondro be dia be, zara raha misy fanandraman-javatra.
Coliander, vinaingitra, anise, saosy oyster, siramamy, sakamalao na saosy hoisin no manjaka indrindra. Anisan'ireo lovia malaza indrindra amin'ny nahandro Cantonese ny malaza dim sum, atody voatavo, henan-kisoa natsatsika na char siu. Avy amin'ny faritra be firenena ny ankamaroan'ny mpifindra monina sinoa Io no sakafo sinoa malaza eran-tany.
Sakafo Sichuan dia tena masiaka sy manitra. Izy ireo no lovia mahazatra an'ny Chongqing na Chengdu, miaraka amin'ny dipoavatra, anisa kintana, sakamalaho, sakay, sakay, kanelina, fennel, jirofo ary tongolo lay. Misy casseroles mafana sy masiaka, akoho misy tsaramaso, na henan-kisoa manitra. Namboarina, natsatsika ary notetehina, fa ny endasina no mahandro malaza indrindra.
Sakafo Jiangsu no sakafo manjaka any Shanghai ary faritanin'i Jiangsu. Manana ny lazany izy io Lakozia lakozia noho ny teknika voadio sy ny fanolorana lovia tsara. Misy vola eto ka ho hitanao ao an-dakozia koa izany.
Izy io dia misy trondro sy akorandriaka tsy mahazatra anisan'izany ny legioma an-dranomasina. Fantatrao ve izy ireo? Ny fanamafisana dia ny tsiro voajanahary ka tsy dia manitra firy ary ny tsiro sy fofona voajanahary no tiana kokoa. Vary, varimbazaha, lotus, faka volotsangana, ahitra maro no nohanina.
Na dia misy nendasina aza, ao anatin'io lovia io ihany teknika fandrahoan-tsakafo samy hafa matetika no atambatra toy ny fikolokoloana, ny setroka ary ny fikolokoloana. Etsy ankilany, misy fizarana anatiny ho amina endrika enina hafa izay misy ifandraisany amin'ny tanàna enina, ohatra ny fomban'ny Nanjing.
Ny sakafo Zhejiang dia azo ahena ho volotsangana, trondro ary fomba fandrahoana samihafa. Izy io dia mitovy amin'ny an'ny teo aloha satria ara-jeografika akaiky izy ireo, saingy dia tsotra kokoa ary tsy dia be pitsony. Ny hevitra dia ny mihinana vaovao ka indraindray mihinana manta mivantana. Zavatra toy ny sakafo Japoney, fa any Chine.
Tsy sakafo mampangotraka na masiaka, fa a nahandro miorina amin'ny trondro sy hazan-dranomasina izany dia teraka avy amin'ny akaikin'ny Pasifika. Tsy lakozia matavy io ary tsy marikivy ary Hangzhou, Ningbo sy Shaoxing no tanàna tsara indrindra manandramana azy. Tianao vatomamy sinoa ve? Miaraka amin'ny varimbazaha, vary ary tsaramaso ity fahagagana ity dia miasa.
Ny nahandro Fujian dia misy lovia misy fika avy amin'ny ranomasina sy ny tendrombohitra. Nozaraina ho fomba telo izy io, ny iray mamy kokoa, ny hafa spicier. ny lasopy sy laoka izy ireo no manam-pahaizana manokana, mitovy ny holatra, ny volotsangana ary ny anana. Tsy misy kaloria, otrikaina maro ary fomba maro karazana vokatra fandrahoana amin'ny fifandraisany ara-tantara amin'ny olona hafa.
Ny sakafo Hunan dia tompoina mafana sy masiaka foana. Izy io dia mamely ilay avy any Sichuan satria mampiasa sakay be dia be. Karazana peppers sy citrus maro no maniry ary noho izany ny Hunan Orange Chicken ho genius.
Ny nahandro Anhui dia ny nahandro an'i Shina amin'ny Tendrombohitra Mavo. Mety tsy dia be mpahalala nefa mahafinaritra satria avy amin'ny tany tsy dia mahavokatra loatra. Azontsika lazaina izany Lakozia tantsaha tsotra sy mahery izy io. Sahona, fano, ahidrano, holatra dia, volotsangana, ravina dite, vary, ovy - tafiditra ao anaty lasopy sy lasakinao izany rehetra izany. Ny hena ankafizina dia ny henan-kisoa, na dia famenoana dumpling aza.
Ary farany tonga tany ny nahandro an'i Shangdon, masira sy mangatsiaka kokoa. ny fish and seafood Izy ireo no filaharana satria faritra amoron-tsiraka. Trondro amoron-dranomasina sy renirano, akorandriaka, paty, sira sy vinaingitra ary vilia mahafinaritra no anaovana azy.
Amin'ny ankapobeny ny fomba fandrahoana sakafo dia ny endasina amin'ny menaka tsara caliente fa tsy menaka ny vokany. Mampiasà tongolo lay, sakay, sakamalao, dipoavatra mena, karazana vinaingitra, voatabia, ovy, atody, laisoa, ary saosy.
OK, hatreto ireo sakafo valo any Chine. Mila manandrana azy rehetra ianao, azo antoka izany, fa raha tsy afaka mivezivezy manerana ny firenena eto aho dia hiala aho ny lovia tokony andramanao:
Akoho Gong Bao: Akoho avy amin'ny nahandro Sichuan izay ankafizin'ny Sinoa sy ny vahiny: akoho masiaka, sakay ary voanjo nendasina.
Kisoa mamy sy marikivy: ny hena dia manana loko mena sy volomboasary mahafinaritra ary ny tsirony… mahafinaritra!
Ma Po Tofu: lovia malaza be izy io ao amin'ny nahandro Chuan manana zato taona mahery taorian'ny namoronana azy. Manana tsiro masiaka sy mahery izy io satria misy vovoka poivra. Izy io dia miaraka amin'ny hena sy sakamalao.
Dumplings: kilasika satria 1.800 taona mahery izy ireo. Pasta io feno hena voatoto sy legioma voatoto na nendasina.
Chow mein: Paty nandrahoina Kantonita izay rehefa avy nandrahoina dia arotsaka ao anaty wok miaraka amina akoho, henan-kisoa, hena na patsabe miampy legioma sasany.
Wontons: Lovia izay niverina tamin'ny andron'ny Dinasti Tang izy ary fomban-drazana ny mihinana azy ireo mandritra ny ririnina. Pasta feno endrika telozoro izay nandrahoina ary aroso anaty lasopy. Indraindray nendasina lalina izy ireo ary tototry ny henan-kisoa na makamba foana.
Bebe Peking: Aza adino ny manandrana azy amin'ny trano fisakafoanana mahazatra eto an-drenivohitra sinoa. Ny hena dia masiaka ary matetika ampiarahina amin'ny pancakes sy saosy tsaramaso mamy na amin'ny saosy soja sy tongolo lay voatoto.
Horonana lohataona: lovia Cantonese izy io, horonan-koba feno legioma na hena, mamy na masira, endasina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » gastronomy » Gastrozika sinoa, fomba valo matsiro tokoa